अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनयापनका लागि कति खर्च लाग्छ ? थाहा पाइराखौ ! —
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनयापनका लागि कति खर्च लाग्छ ? थाहा पाइराखौ !
१४ माघ २०७७, बुधबार १३:४० admin	0 Comments
अष्ट्रेलिया : विश्वस्तरिय शिक्षा प्रणाली भएका थुप्रै विश्वविद्यालयहरु र पाठ्यक्रममा विविधता रहेको हुँदा अष्ट्रेलिया आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। यहाँका विश्वविद्यालयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि थुप्रै किसिमका छात्रवृत्तिहरुको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ।साथै विद्यार्थीहरुले अध्ययन पछिको खालि समयमा आफ्नो सीप अनुसारको जागिर पनि गर्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाको उच्च स्तरको जीवनशैलीले पनि आकर्षित गर्दछ।
अष्ट्रेलियाका छ ठूला शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बसोबास गर्नका लागि लाग्ने औसत खर्च:
१ – सिड्नी – प्रति महिना औसत खर्च – १९०० अष्ट्रेलियन डलर
२ – एडलेड – प्रति महिना औसत खर्च – १३०० अष्ट्रेलियन डलर
३ – ब्रिसबेन – प्रति महिना औसत खर्च – १४०० अष्ट्रेलियन डलर
४ – मेलबर्न – प्रति महिना औसत खर्च – १५०० अष्ट्रेलियन डलर
५ – क्यानबेरा – प्रति महिना औसत खर्च – १४०० अष्ट्रेलियन डलर
६ – पर्थ – प्रति महिना औसत खर्च – १८०० अष्ट्रेलियन डलर
उल्लेख गरिएको खर्च औसत खर्च हो। बसोवासको क्षेत्र र आफ्ना आवश्यकता अनुसार खर्च घटीबढी हुनसक्छ । Source:mastersportal.com
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियाको बिजनेस भिजिटर स्ट्रिम भिसा भनेको के हो ? थाहापाइराखौ !
अष्ट्रेलिया : बिजनेसका क्रममा अष्ट्रेलिया आउन चाहने व्यक्तिका लागि यो भिसा उपयुक्त हुन्छ। यस भिसा अन्तर्गत अष्ट्रेलिया आउने व्यक्तिले बिजनेससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्न सक्छ तर काम गर्न वा कुनै वस्तु बेचबिखन गर्न पाउँदैन। यो भिसाको समय अवधि तीन महिनाको हुन्छ र यसको भिसा शुल्क १४५ अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ।
यो भिसाको म्याद नसकिदा सम्म एक वा एक भन्दा बढी पटक अष्ट्रेलिया जान सकिन्छ। यस किसिमको भिसाका लागि आवेदन दिँदा भिसा आवेदक अष्ट्रेलिया बाहिर हुनु जरुरी हुन्छ। यो भिसाको प्रक्रियाका लागि छ देखि चौध दिन सम्म लाग्न सक्छ। बिजनेस भिजिटर स्ट्रिम भिसा प्राप्त गर्नका लागि नियम र सर्तहरू :
१ – अष्ट्रेलिया सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य विवरण हुनुपर्छ।
२ – सकारात्मक व्यक्तिगत विवरण हुनुपर्छ अर्थात भिसा आवेदकका बारेमा कुनै क्रिमिनल रेकर्ड हुनुहुँदैन।
३ – तपाईंको अथवा तपाईंको परिवारका सदस्यले अष्ट्रेलिया सरकारको ऋण लिएको भए चुक्ता गर्नुपर्छ वा चुक्ता गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्छ।
४ – अष्ट्रेलियामा रहुन्जेल सम्मका लागि बस्न-खान पुग्ने गरी पैसा हुनुपर्छ।
५ – अष्ट्रेलियाको वास्तविक आगन्तुक ( जिनिउन भिजिटर ) हुनुपर्छ। अर्थात अष्ट्रेलियामा रहँदा त्यहाँको नियम कानून बमोजिम बस्नुपर्छ।
६ – भिसा आवेदकको उमेर अठारह वर्ष पुगेको हुनुपर्छ।
७ – यस भिसा अन्तर्गत अष्ट्रेलियामा रहेका बेला जागिर गर्न अनुमति हुँदैन।
८ – स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्छ।
९ – व्यवसाय सम्बन्धि कन्फरेन्स अथवा ट्रेड फेयरमा सहभागी हुन सकिन्छ। तर कार्यक्रममा भाग लिनका लागि कुनै संस्थाले तपाईंलाई पैसा दिएको हुनुहुँदैन।
१० – कुनै सामान बेचबिखन गर्न अनुमति हुँदैन।
११ – व्यवसायबारे बुझ्न तथा सोधपुछ गर्न सकिन्छ।
१२ – अष्ट्रेलियाका कुनै व्यावसायिक संस्थाका लागि काम गर्न अनुमति हुँदैन।
Source : https://immi.homeaffairs.gov.au/
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियामा किन्डरगार्टेन शिक्षकको जागिर र तलब थाहा पाइराखौ !
अष्ट्रेलिया: विशेषगरी चार देखि छ वर्षको बच्चालाई सुरक्षित वातावरण सहितको शान्त कक्षा कोठामा शुरुवाती औपचारिक शिक्षा दिने व्यक्तिलाई किन्डरगार्टेन टिचर भनिन्छ। किन्डरगार्टेन टिचरको मुख्य उद्धेश्य बच्चाको उच्च स्तरिय शिक्षाको जग बसाल्ने काम हो। यसका लागि हरेक बच्चाको मनोभावना बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
किन्डरगार्टेन टिचरको काम तथा जिम्मेवारी :
१ – बच्चाहरुलाई औपचारिक शिक्षा लिनका लागि विभिन्न मनोरन्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न गराई प्रोत्साहन गर्नु।
२ – औपचारिक शिक्षाका साथै सामाजिक अन्तर्क्रिया तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीका बारेमा पनि अवगत गराउनु।
३ – अक्षर र नम्बरहरु सिकाउँदा प्रत्येक बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक स्थिति बुझेर सिकाउने।
अष्ट्रेलियामा किन्डरगार्टेन टिचरको काम गर्नको लागि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन अथवा सम्बन्धित विषयमा ब्याचलर डिग्रीको कोर्स गरेको हुनुपर्छ।
अष्ट्रेलियामा किन्डरगार्टेन टिचरको तलब : पेस्केलका अनुसार, अष्ट्रेलियामा किन्डरगार्टेन टिचरको प्रति घण्टा औसत तलब ३०.३८ अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ। किन्डरगार्टेनबारे आधारभूत कुराहरु थाहा भएको र सम्बन्धित कामको एक वर्ष भन्दा कम समयको अनुभव भएको व्यक्तिले अष्ट्रेलियामा प्रति घण्टा औसत तलब २८.०२ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ।
एक देखि चार वर्षको अनुभव भएको किन्डरगार्टेन टिचरले प्रति घण्टा औसत तलब २९.७८ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ भने पाँच देखि नौ वर्षको अनुभव भएको किन्डरगार्टेन टिचरले प्रति घण्टा औसत तलब ३१.५९ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ। त्यस्तै दश देखि उन्नाइस वर्षको अनुभव भएको किन्डरगार्टेन टिचरले प्रति घण्टा औसत तलब ३३.१४ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ भने बीस वर्ष भन्दा माथिको अनुभव भएको किन्डरगार्टेन टिचरले प्रति घण्टा औसत तलब ३४ अष्ट्रेलियन डलर सम्म पाउन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियामा डेन्टल असिस्टेन्टको जागिर र तलब थाहा पाइराखौ !
अष्ट्रेलिया : डेन्टल क्लिनिकमा दाँत तथा गिंजा सम्बन्धि समस्या लिएर आउने बिरामीको परिक्षण गर्नु ,डेनटिस्टको सहायता गर्नु साथै क्लर्क सम्बन्धि सम्पूर्ण काम गर्नु डेन्टल असिस्टेन्टको जिम्मेवारी हुन्छ। बिरामीलाई अपरेसनका लागि तयार गर्नु ,डेनटिस्टलाई अपरेसनको समयमा मद्धत गर्नु साथै अपरेसनका लागि चाहिने टूल्सहरु डेनटिस्टको हातसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पनि डेन्टल असिस्टेन्टको हुन्छ।
डेन्टल असिस्टेन्ट बन्नका लागि दाँत र गिंजा सम्बन्धि मेडिकल कुराहरुको जानकारी हुनुपर्छ। डेनटिस्टले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण उपकरणका बारेमा थाहा हुनुपर्छ। डेन्टल क्लिनिकको क्लार्क सम्बन्धि सम्पूर्ण काम डेन्टल असिस्टेन्टको हुने हुँदा डेनटिस्टसँग अपोइन्टमेन्ट मिलाउने, बिल बनाउने ,बिरामीको रेकर्ड राख्ने जस्ता काम डेन्टल असिस्टेन्टले गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल हुनुपर्छ र कम्प्युटर सम्बन्धि बेसिक कुराहरु थाहा हुनुपर्छ।
पेस्केलका अनुसार, अष्ट्रेलियामा डेन्टल असिस्टेन्टको प्रति घण्टा औसत तलब २४ अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ। डेन्टल सम्बन्धि कामको एक वर्ष भन्दा कम समयको अनुभव हुनेले प्रति घण्टा औसत २० .९७ अष्ट्रेलियन डलर पाउन सक्छ। एक देखि चार वर्षको अनुभव हुनेले प्रति घण्टा औसत २३ .११ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ भने पाँच देखि नौ वर्षको अनुभव हुनेले प्रति घण्टा औसत २५ .२५ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ।त्यस्तै दश देखि उन्नाइस वर्षको अनुभव भएको डेन्टल असिस्टेन्टले प्रति घण्टा औसत २६ .२२ अष्ट्रेलियन डलर पाउन सक्छ र बीस वर्ष भन्दा बढी समयको अनुभव हुनेले प्रति घण्टा औसत २७ .०० अष्ट्रेलियन डलर पाउन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियामा जागिर पाउन विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ ? ७ सुझावहरु थाहा पाइराखौ !
अष्ट्रेलिया : अष्ट्रेलिया अध्ययन संगै जागिर गर्दा दैनिकी खर्चका लागि पैसाको जोहो हुनुको साथै साथीभाईसंग आफ्नो नेटवर्क बढाउने मौका पनि मिल्छ।स्टुडेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया आएको विद्यार्थीले हप्ताको बीस घण्टा काम गर्ने अनुमति पाउँछ। नयाँ देशको नयाँ ठाउँमा जागिर पाउन सजिलो त हुँदैन तर केहि महत्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिए असम्भव पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया आएपछि अध्ययन संगै जागिर पाउनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :
१ – आफ्नो अधिकारका साथै जिम्मेवारीका बारेमा राम्ररी बुझ्नुहोस्।
स्टुडेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया आएको विद्यार्थीले हप्ताको बीस घण्टा काम गर्ने अनुमति पाउँछ साथै क्लासको सेसन नभएका बेला बीस घण्टा भन्दा बढी अर्थात् असीमित काम गर्न पाउँछ। यदि तपाईंले अष्ट्रेलियामा काम गर्ने मनस्थिति बनाउनुभयो भने सबैभन्दा पहिला ‘ट्याक्स फाइल नम्बर ( टि.एफ.एन )’ का लागि आवेदन दिनुपर्छ। जसबाट पाएको नम्बर करका साथै अरु सुपर सिस्टममा प्रयोग हुन्छ। यदि तपाईंले टि.एफ.एन नम्बर लिनुभएको छैन भने तपाईंको ४५% तलब करका लागि रोकिनेछ।
२ – जागिरका बारेमा अनुसन्धान तथा योजना बनाउनुहोस्।
अष्ट्रेलिया आइसकेपछि जागिरका लागि सम्बन्धित विषयमा सकेसम्म धेरै जानकारी बटुल्ने कोशिश गर्नुपर्छ । आफूले काम गर्न चाहेको उद्योग र रोजगारी दिन सक्ने लोकल मार्केट देखि लिएर सम्भाव्य रोजगारदाता ,अष्ट्रेलियाका रोजगारदाताहरुले कामदार भर्ति गर्ने तरिका सम्मका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। जसले गर्दा आफूलाई रोजगार दाता समक्ष राम्रो प्रस्तुति दिन सकिन्छ र आफूले कस्तो काम कुन उद्योग वा कम्पनीमा काम गर्दा बेस हुन्छ हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ।
३ – चिनजानको नेटवर्क बढाउनुहोस्।
अहिले धेरै ठाउँमा कसले कसलाई चिनेको छ त्यस भरमा जागिर दिईन्छ। त्यसैले आफूले पढ्ने युनिभर्सिटी भित्र तथा बाहिर चिनजान बढाउनु पर्दछ। साथै आफूले काम गर्न चाहेको उद्योग तथा कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरुसंग परिचित हुने कोशिश गर्नुपर्छ।
४ – आफूमा भएको युनिक ‘बेच्ने कला’ पत्ता लगाउनुहोस
जागिरका लागि उभिएका अन्य प्रतियोगी भन्दा आफूले फरक तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएका कारण आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभव रहेको साथै फरक-फरक संस्कृतिका व्यक्तिहरुसंग व्यवहार गर्न सक्ने खुबी भएको बताउनुपर्दछ। त्यस्तै अंग्रेजी भाषामा आफू कुशल हुनुका साथै नयाँ वातावरणमा छिटै घुलमिल हुनसक्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्छ।
५ – आफ्नो सीप र काम सम्बन्धि अनुभव बढाउनुहोस्।
युनिभर्सिटी ,क्लब तथा सोसाइटीले बेला बेलामा आयोजना गर्ने विभिन्न भलुन्टियर कार्यक्रममा सहभागी भइ काम सम्बन्धि आफ्नो सीप र अनुभव बढाउनु पर्छ। किनकी रोजगारदाताले काम सम्बन्धि धेरै समयको अनुभव भएको कुशल व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन्।
६ – प्रिपेअर एण्ड प्राक्टिस
जागिरका लागि अन्तर्वार्तामा सोधिने प्रश्नका साथै आफ्नो सीप र कलाको रोजगारदाता समक्ष प्रदर्शन गर्नका लागि आफूलाई सधै तयार राख्नुपर्छ।
७ – आफूमा आत्मविश्वास बढाउनुहोस्।
आफूले सोचेजस्तो जागिर नपाउञ्जेल अरु सानो तिनो काम भएपनि गरेर आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ। केहि सीप सिक्ने मौका मिले सिकेर आफूलाई अझ निखार्नुपर्छ। विभिन्न सामजिक कार्यमा आफूलाई सक्रिय राक्नुपर्छ जसले गर्दा स्थानीय संस्कृतिका बारेमा बुझ्न तथा आफ्नो अंग्रेजी भाषा सुधार्न मौका मिल्छ। – हिमालयन कंगारो बाट
← नेपाल आइडलकी मेचुले ल्याइन् अत्यन्तै मर्मस्पर्शी गीत ‘मैले के बिगारे’ (भिडियो)
विश्वका धनाड्य जेफ बेजोसले प्रेमिकाका भाइसंग मागे करोडौं क्षतिपूर्ति →
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पार्ट-टाइम जागिर गर्न पूरा गर्नुपर्ने नियम थाहा पाइराखौ !
१७ माघ २०७७, शनिबार ०५:३२ admin	0
यस्ता प्रतिभा हुनेले सजिलै पाउँछन् अष्ट्रेलियाको पीआर – थाहा पाइराखौ !
२२ माघ २०७७, बिहीबार १०:२५ admin	0
अष्ट्रेलियामा डिसएबिलिटी केयर वर्करको जागिर र तलब थाहा पाइराखौ !
२१ माघ २०७७, बुधबार ०३:२४ admin	0